नेपाल आज | यस्ता छन ब्लड प्रेसर लो हुँदा अपनाउनुपर्ने उपायहरु ! जानिराखौं
यस्ता छन ब्लड प्रेसर लो हुँदा अपनाउनुपर्ने उपायहरु ! जानिराखौं
गलत खानपान र जीवनशैलीका करण मानिसहरु पछिल्लो समय विभिन्न रोगहरुका शिकार हुन् पुगेका छन। उच्च रक्तचाप , मधुमेह अरु यस्तै यस्तै , पछिल्लो समय हाई ब्लड प्रेसरका जति बिरामी छन त्यति नै अनुरुपमा प्रेसर लो भएकाहरु पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गैरहेका छन। उच्च रक्तचाप भएकालाई जस्तै न्यून रक्तचापको समस्या भएकाहरुको पनि उचित स्याहार सुसार र हेरचाह गर्नु आवश्यक छ।
आज हामी न्यून रक्तचापका बिरामीले अपनाउनु पर्ने केहि उपायहरुका बारेमा कुरा गर्न जादै छौं आउनुहोस ,
मध्यपानको सेवनले रक्तचाप बढ्छ भन्ने धारणा रहेको छ। हरेक १० ग्राम रक्सि पिउदा तपाईको प्रेस १ एमएमएचजीले बृद्धि हुन्छ। रतर ब्लड प्रेसर लो छ भने मदिरा सेवन भने गर्नु हुदैन। अत्यधिक अल्कोहलको मात्राले डिहाइड्रेसन ल्याउछ र रक्तचापको मात्रा घट्छ। त्यसैले रक्तचापका समस्या भएकाहरुले जतिसक्दो मात्रामा पानी पिउनु आवश्यक छ।
उच्च रक्तचाप भएकाहरुलाई बढी नुन मिसाईको खाना खानु राम्रो मानिदैन। तर यसो हो भन्दैमा नुन ब्लड प्रेसर लो भएका बिरामीहरुले धेरै नुन खानु भनिएको पनि होइन। आवश्यकता हेरी नुनको मात्रा चयन गर्नु आवश्यक छ। चिकित्सकका अनुसार दैनिक २ देखि ३ एमजी नुनमात्र प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यबर्धक रहेको छ।
आकस्मिक शारीरिक गतिबिधि त्याग्ने
आँखा धमिलो देखिनु र टाउको हल्का दुख्नु न्युन रक्तचापका लक्षणहरु हुन्। त्यसैले बसिरहेको स्थानबाट झटपट उठ्दा रक्तचाप न्यून भएको बेला आँखा धमिलो हुने वा रिंगटा लाग्ने भएकाले उभिनु भन्दा अगाडि पैतला र खुट्टालाई हल्का दबाउनु आवश्यक छ।
पटक पटक खाना खाने
न्यून रक्तचाप भएका मानिसहरुमा खानापछि हाइपरटेन्सन वा आँखा धमिलो हुने समस्या हुने भएकोले एकै पटक धेरै खानाखानु हुदैन । बरु हरेक दुई दुई घन्टामा थोरै थोरै खाने खाने गर्नु स्वास्थ्यका साथै रक्तचापका लागि पनि फाइदाजनक रहेको छ।